China 30inch Steel Saribao afo Pit Manufacture sy Factory | Chuliuxiang
30 mirefy vy saribao afo lavaka
[Mateza] Ny lavaka afo ivelany dia vita amin'ny harato vy sy rafitra mafy orina, maharitra.
[Ireo tanjona] Ny famolavolana matanjaka miaraka amin'ny lamina manokana dia mety amin'ny hafanana, BBQ, siny gilasy.
[Design] Ny lavaka afo efamira haingon-trano dia manasongadina famolavolana tsipika faux stone mahafinaritra.
[Salama] Ny saron'ny harato dia mandrakotra ny afo, manakana ny pitik'afo na ny potipoti-javatra manidina.
[Fivoriambe]Mora ny mametraka. Sarona MAIMAIMPOANA mba hitazonana an'ity lavaka afo vy ity ho madio sy hisorohana ny harafesina.
Azo atao ve ny mampiasa saribao ao anaty lavaka afo?
Ny fananana lavaka afo ao an-tokotany dia fomba mahafinaritra hiarahana amin'ny fianakaviana na namana. Ny lavaka afo dia mety ho na inona na inona manomboka amin'ny lavaka nohadiana amin'ny tany ka hatramin'ny fitaovana matanjaka kokoa vita amin'ny metaly, biriky, na fitaovana mafy hafa. Saingy, matetika ny mpampiasa dia tia manandrana izay mety hodorana ao anaty lavaka, ary maro no manontany tena momba ny saribao’ s fahombiazana amin'ny iray.
Eny, afaka mampiasa saribao ao anaty lavaka afo ianao. Ny saribao dia hazo izay’nodorana tao amin'ny faritra tsy misy oksizenina, nefa mbola afaka mandoro bebe kokoa, mamorona hafanana, ary safidy tsara raha mikasa ny hahandro ao amin'ny lavaka afo ianao.
Misy fomba hafa handosirana ny lavaka misy anao, arakaraka ny lavaka anananao. aoka’s jereo ny fomba isan-karazany ny solika iray.
Fandrehitra Lavaka Afo Amin'ny Saribao
Ny saribao dia noforonina tamin'ny alàlan'ny hazo fandoroana misy oksizenina kely manodidina. AFO Ireo mpankafy pit dia mankafy ny fampiasana ny akora noho ireto antony manaraka ireto:
Mora azo ary vidiana amin'ny fivarotana rehetra.
Mitazona hafanana ambony
Tsy misy fofona setroka mivoaka, ka raha ampiasaina amin'ny fandrahoan-tsakafo dia ny tsiron'ny setroka no nahazo’t mandresy ny sakafo.
Fisafidianana ny karazana saribao mety
Misy karazana saribao samihafa.
Saribao voatsindry. Ity saribao ity dia ny mahazatra izay azonao vidiana amin'ny fivarotana entam-barotra rehetra. Mampifangaro tapa-kazo kely sy akora hafa toy ny voa izy ireo, ary manampy azy ireo hirehitra haingana kokoa sy hirehitra ela kokoa ny fanampim-panafody simika.
Saribao voatsindry miaraka amin'ny hazo mifoka sigara. Ny ala mifoka sigara, toy ny hickory, dia ampidirina ao anaty saribao mba hanomezana azy ny tsiron'ny setroka rehefa mihosotra. Samy manana a‘hazavana mifanandrify’ version.
Ny saribao voatavo dia vita amin'ny kitay hazo mafy efa nomainty sy nodorana. Mafana kokoa ny hafanana ary manome tsiron-tsakafo tsara kokoa ny sakafo tsy misy simika.
Tombontsoa azo avy amin'ny fananana dobo afon-tsaribao
Nahoana ianao no tokony hahazo lavaka afo? Tsy ny estetika ihany no tombony amin'ny fananana iray.
teo aloha: Lavaka afo propane ivelany
Manaraka: Vidin'ny orinasa ho an'i Shina mora vidy CE Portable Tempered Glass 3 Burner Gas Stove Table Top Cooktops Gas
lavaka afo zaridaina
Lavaka afo entona sy hazo
lavaka afo ivelany
Seramika komado grills
Toeram-pisakafoanana zaridaina 24-inch mifoka sigara
Afon-tsaribao miforitra miaraka amin'ny giro mifoka sigara
Fandrahoan-tsakafo an-kalamanjana any ivelany
Safotry ny fatana barbecue any ivelany